Moon oo Trump kala talinaya waxyaabaha uu Kim kala hadlayo - BBC News Somali
Moon iyo Trump
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kauuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa la filayaa in ay goor dhow kulan ku yeeshaan magaalada Washington, in kastoo shaki la galinaya suurtagalinimada ah in uu qabsoomo shirka loo balansanyahay ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Toddobaadkii tagay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay suuro gal tahay in la joojiyo shirkaasi waa haddi Mareykanka uu ku adkeysto in
Mr Moon ayaa isku dayi doono in uu la hadlo Mareykanka si wadada hadadallada aan loo baajin.
Mid ka mid ah saraakiisha Moon ayaa sheegay in Moon uu Trump uu sheegi doono waxyaabaha laga filayo iyo waxyaabaha aan laga filayn Kim. Sidaasi waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee Yonhap
Shirka taariikhiga ee 12 June ayaa la filayaa in ka dhaco Singapore kaas oo u madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi
Maxay tiri kuuriyada waqooyi?
Shirka waxaa markii hore shaki galiyay markii ay Kuuriyada waqooyi maalintii Arbacada ahayd joojisay kulan ay la lahayd saraakiil sar-sare oo ka socotay Kuuriyada Koonfureed, iyadoo sheegtay in ay ka carootay hawl gal milatari oo ay si wadajir ah u fuliyeen Mareykanka iyo Koonfurta.
Waxaa taa xigay hadal ka soo yeeray la taliyaha dhanka amniga ee Mareykanka John Bolton, kaasi oo ay ku eedeyeen in uu sheegay "hadal aan laga fiirsan". Kadib markii uu sheegay in kuuriyada waqooyi ku tusaale qaadato sidii Libiya ay burburisay hubkeeda nuclear-ka.
TOOS Buhari oo loo yeeray kaddib xasuuq ka dhacay Nigeria